Ukumaketha Kwezethameli Ze-Cross-Platform | Martech Zone
ULwesibili, April 1, 2014 NgoMsombuluko, Mashi 31, 2014 Douglas Karr
Abantu baseMelika abangama-88% okungenani banamadivayisi ayi-2 axhunywe kwi-inthanethi kanti ama-90% amaMelika asebenzisa amadivayisi amaningi ngokulandelana usuku lonke. Kubakhangisi, lokhu kunikeza kokubili inselelo nethuba lokuxhumanisa nokusuthisa abanolwazi lapho izethameli zikhona… ngenkathi kuqinisekiswa ukuthi basebenzisa amandla wedivayisi abxhumana kuyo.
Lokhu infographic evela ku-Uberflip bamba amaqiniso - ukuthi yiziphi izibalo zabantu ezikumadivayisi, isikhathi esichithwa kuzo, nokuthi ochwepheshe bathini - ukuze ukwazi ukuzivumelanisa nokuzamazama isu lakho lokuqukethwe kweselula. Ngena ngaphakathi bese uqhubeka uskrolela phansi ukuqoqwa kwemiphumela yethu ebalulekile.
Tags: i-bill dugganipulatifomuukwenza imisebenzi eminingi yedivayisiukwenza izinto eziningi ngedivayisiGoogle +u-heidi cohenimithombo yezindaba yeselulaneal mohanukubukwa kwe-tvuberflip
Ama-Leger Metrics: Ukubikwa Okusebenzayo kwe-Voice of Customer (VoC)